Maalinta: 24-ka July, 2019
Xilliga Sanduuqa Madoow ayaa ka bilaabmaya Basaska SAMULAŞ
Degmada Samsun ee Magaalo-Weyne SAMULAı'nn Tababarka Tacliinta ee waxaa lagu soo qaatay mowduucyadii ugu dambeeyay ee Maareynta Baska 'Badbaadinta, Nabdoonaanta, Safarka Raaxo leh' ayaa la baarayaa. Maareeyaha Guud Tamgacı wuxuu shaaca ka qaaday in wadarta basaska 110 ay u wareegi doonaan nidaamka 'Vehicle Telemetry (Karakutu)'. [More ...]
Shilkii Diyaaradeed ee ka dhacay Magaalada Uskudar! 10 Dhaawacmay
Shil Gaari oo ka dhacay Magaalada Uskudar! 10 Dhaawacmay. Mid ka mid ah gawaarida waaweyn ayaa ku burburtay isgoyska hortiisa ee saldhigga Burhaniye ee Üsküdar, Istanbul. Marka loo eego macluumaadka la helay, Söğütlüçeşme 10 July Martyrs [More ...]
Wada-hawlgalayaasha Dayactirka Qolka Calaamadaha ee ku yaal Khadka Denizli
Dayactirka iyo Dayactirka Wadooyinka Calaamadaha ee kuyaala Khadka Denizli Natiija ahaan qandaraasyada Maamulka TC State Railways 3. 2019 / 314601 GCC qiimaha xaddidan ee Adeegga Iibsiga Gobolka iyo Maareynta Adeegga Xakamaynta Xawaaladda (TCDD) 270.786,49 [More ...]
Bartilmaameedka 2020 200 Kun Doolar Gawaarida Korantada iyo Gawaarida XNUMX!
ALD Automotive Turkey, "Event Hybrid macaamiisha la kaashanaya Toyota Turkey" gaar ah oo lagu qabtay. Ta labaad ee ALD Automotive Wax ku oolnimada 'ay' waxay kor u qaadeysaa wacyiga teknolojiyadda powertrain kale iyo [More ...]
Wadashaqayn adag ee Tijaabinta Qalabka Qalabka Korantada ee Elevator
BTSO MESYEB, oo hirgelisay Imtixaanka Qalabka Amniga ee G Safetyvenlik Elevator Security Equipments iyo Xarunta Horumarinta wherei halkaas oo qeybaha badbaadada ee wiishka lagu qaadi karo lagu kalsoonaan karo habka ugu kalsoonida badan, waxay saxiixeen borotokool kale oo muhiim ah oo iskaashi ah. Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyada [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun Samulaş A.Ş. Khadka dhererka dhererka mitir ee 320 Amisos Hill Cableway Line, oo ka kooban laba joogsi, waxaa loo qorsheeyay in lagu dhiso 23.07.2019 si loo bixiyo adeeg aamin ah oo tayo sare leh. [More ...]
Şahin Şerifoğulları, Duqa magaalada Elazığ, wuxuu sii wadaa fulinta barnaamijyada gaadiidka ee lagu dhawaaqay doorashada ka hor. Şerifoğulları, oo mashruucan ka fuliyay dhaqancelinta iskuxirka Gaadiidka Dadweynaha ee iskujira, [More ...]
Wadashaqeynta Mashruuca Cusboonaysiinta Soonaha Sakarya ee Wadada Sakarya
Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii wadaysaa inay ka taageerto degmooyinka degmada arimo ay ka mid yihiin wadooyinka, rafcaanka iyo qurxinta dhirta. Degmooyinka magaalo-weynaha kama diidayaan dalabaadka degmooyinka degmada waxayna fuliyaan daraasadaha qorshaynta ee baahiyaha. Ugu dambeyntii [More ...]
Buundada, Dalcik iyo Wadooyinka Waddooyinka Laamiyaalaha ah rinjiyeeyay Kocaeli
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, iyada oo wadata howlo dhaqan-gal ah kuwaas oo raaxo u keenaya qaybaha gaadiidka ee dhismayaashaas waqti ka dib muuqaalka sii xumaanayana ma iloobo inay wax ka qabtaan. Macnaha guud, isgoyska waxaa keenay magaalada Caasimadda ah, [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay cusbooneysiineysaa iyadoo kusii fideysa Wadada Sakıp Sabancı Street oo kutaala Köseköy Mehduh Tagmaç Barracks waxayna u adeegtaa muwaadiniinta waddo kale oo udhaxeysa Kartepe Köseköy - İzmit. Waaxda Sayniska [More ...]
16 1961 bilaabay bishii June iyo maalin buuxda 129 dhameystirtay baabuur wadaniga Turkey ee ugu horeysay ruuxa 'Car Revolution' soo noolaaday. Kooxda ay aasaaseen ardayda Eskişehir Osmangazi University (ESOGÜ) waxaa lagu magacaabaa "Devrim26". [More ...]
Ka hor soo-saarka khadka gawaarida korantada si ay u soo jiidaan diyaaradda si ay u muujiyaan jirku wuxuu ku dhawaad ​​ahaa moodada. Waxaan aragnay tusaalayaashii ugu dambeeyay ee noocaan ah nooca korantada ee Mini Cooper. Mashruuc xayeysiis oo la mid ah ayaa ka yimid Ford. korontada [More ...]
Lixdii bilood ee ugu horreeyay ee 2019, Gawaarida DiyaV ee loo adeegsaday 12 milyan oo rakaab ah ayaa kor u kacay boqolkiiba 38,3 marka loo eego isla muddadaas sanadkii hore. Turkey waa brand dunida ee keentay in diyaarad wadeen garoonka diyaaradaha, Maddaarada tav QABASHADA qeybtii hore [More ...]